The taxane Microsoft Lumia iibsaday telefoonada Windows galay upkiisa ka, iyada oo dadka isticmaala Windows eegaya telefoonada smart markii ugu horeysay ay badal u tahay telefoonada Android. Waa maxay soo shaqeeyay telefoonada Windows ahaayeen fiirin cusub, ee Details soo hagaagtay, iyo qaar ka mid ah suuq-wanaagsan ka Nokia.
Windows waa OS kale oo caan ka ah dadka isticmaala smartphone. Si kastaba ha ahaatee, badalista ka Android inay Windows Phone waa duwantahay yar sababta oo ah hababka qalliinka oo kala duwan. Nasiib wanaag, xogta loo gudbin karaa siyaabo dhowr ah. Haddii aad rabto in aad sida ugu dhaqsaha badan, waxaad u baahan doontaa software xisbiga saddexaad si ay u kala iibsiga. Aad Xaaladdan oo aan diyaar u yihiin inay ku qaataan, waxaa jira siyaabo yar ay kala iibsiga Data.
1. .Wadashaqayntaas doorasho ka Windows
2. howlan via daruurta
3. xog Transfer la Mobiletrans Wondershare in mid ka mid click
Doorasho .Wadashaqayntaas ka Windows
Windows ogolaado in aad u hagaagsan la xisaabtaada Google. Google badan account qabsaday xogta phone hore Android sida xiriirada, jadwalka taariikhda, Google daray sawiro, iwm Halkan waa hab ah in aad isticmaali karto si aad u hagaagsan xisaabtaada Google in Windows
Hubi in xogta la Synced in account Google oo loo isticmaalo ee Android 1. Laga soo bilaabo telefoonka jir sameeyo. Hadda, qaado Windows phone cusub. Tag app Settings, oo markaas waa inay goobaha 'email + xisaabaadka'.
2. Haatan waxaan idin dhawr fursadood oo ah marka la eego ku daray xisaab in aad telefoon daaqadaha. Dooro xisaabta Gmail ka dibna geli aqoonsiga xisaabta Gmail inay saxeexaan. Hadda kaliya dooro taariikheed, xiriirada, hawlaha, iyo email ah waafajinta aad Windows phone cusub.
Waxaad isticmaali kartaa xisaab kale waafajinta xogta. Sida aad isticmaali kartaa Facebook waafajinta photos haddii aad inta badan sawiro ku saabsan xisaabta Facebook ku kaydiso. Si kastaba ha ahaatee, habkan ayaa faa'iidada iyo khasaaraha ay u gaar ah.
Habkani waa ay fududahay in aad u hagaagsan xiriirada, jadwalka taariikhda, emails iyo warbaahinta online ka baraha bulshada.
Waxaad isticmaali kartaa xisaabta Gmail isla telefoonka daaqadaha in aad loo isticmaalo hore Android.
Habkani ay hubisaa in ammaanka dhamaystiran oo xogta aad.
Waxaad isticmaali kartaa aragti si ay u maareeyaan macluumaadka.
Waxaad waafajinta karaa Gmail, Facebook, Outlook, Yahoo iyo xisaab kasta oo kale oo aad si joogto ah u isticmaalaan.
Faa'iida ugu weyn ee habkan waa in aad u hagaagsan kartaa xogta ku joogo online kaliya.
Data sida app, sawiro ku kaydsan aad Android uma wareegi karo.
Farriimaha qoraalka aan loo gudbin karaa telefoonka Windows. App Kaliya fariimaha ku salaysan sida Rasuul Facebook ama WhatsApp la synced kartaa server-ada.
Howlan Via Cloud
Mid ka mid ah Drive waa Windows app stock in aad kaydiya xogta Windows on One Drive. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo faylasha aad, waxa ay noqon kartaa hab fiican si ay u gudbiyaan xogta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa in ay gacanta u geliyaan xogta ka android in Mid ka mid ah Drive ka dibna download it ah ee aad taleefan Window.
Halkan talaabada hagitaan talaabo talaabo si ay u gudbiyaan xogta la isticmaalayo One Drive,
1. Download mid Drive telefoonka aad Android oo ku xidh.
2. Hadda fur App iyo gasho isticmaalayo aqoonsiga in aad isticmaalayso si aad Windows. Hadda hoose ee midigta ah app halkaas ku noqon doonaa calaamo lagu daray. Just guji ku yaal oo ay doortaan nooca file aad rabto in aad ka geliyaan.
3. Hadda dhirtuba dhex telefoonka android iyo dooran files in aad rabto in aad geliyaan. Marka file la doortay, kaliya dooro Upload dhankiisii ​​midig sare ee shaashadda.
4. Haddaba tag si aad telefoon Windows iyo furi app One Drive la isticmaalayo aqoonsiga loo isticmaalo app ee Android.
5. files ayaa si toos ah synced doonaa in aad telefoon ama kaliya dhirtuba file iyo inaad kala soo baxdo waxa aad telefoon ka jaftaa ku yaal.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad u hagaagsan xiriir la isticmaalayo habkan. Dhoofinta xiriirada ee si file .CSV ka android oo geliyaan si ay u One Drive. File CSV Waxaad ka furan kartaa ka Mid Drive ee telefoonka Windows.
Sidaas, waxa ay tahay in aad maskaxda ku hayso marka la isticmaalayo habkan? Halkan waxa aad ku arki deg deg ah.
Habkani waa ku weyn yahay, waayo, wareejinta faylasha weyn sida videos, iyo sawiro. Waxaa intaa dheer, document files ayaa sidoo kale loo gudbin karaa.
Waxa aad war dheeraad xakameeyo badan faylasha sida aad gacanta iyaga ayaa dooranaya ka telefoonka.
Waxaad gali kartaa hab habaysan sida One Drive ku siiyo doorasho si ay u abuuraan fayl cusub.
Haddii aad ku jirtay isticmaalaya One Drive ku Android, waxaad samayn One Drive keydinta default ikhtiyaarka u photos Camera iyo videos.
Mid ka mid ah Drive waa stock app on Windows halkan ka, iyadoo la isticmaalayo isla aqoonsiga faylasha aad si toos ah synced doonaa in telefoonka daaqadaha.
Habkani waxa uu leeyahay xad qaar ka mid ah sida aad si toos ah oo aan meeshaba oolin karo xiriirada, fariimo iyo jadwalka.
Waxaad heli doontaa si aad u hubiso size file ka hooseeyo xadka size of One xisaabta lacag la'aan ah Drive ah.
Ma jiro hal click, waxaad u leedahay in gacanta dooran files iyo folder aad rabto in aad u hagaagsan oo isticmaalaya sahamisa file on Android telefoonka.
Waxaad u baahan tahay internet wanaagsan sida aad la uploading doonaa files ka dibna lagala on in aad Windows Phone.
Labada fursado waaweyn yihiin marka ay timaado xogta laga telefoonka aad Android wareejiyo si aad telefoon Windows. Waynayn, xogta diraya badan daruur isticmaali kartaa ilaa tan oo xogta aad internet oo markaa waxaa lagu talinayaa si ay u gudbiyaan xogta iyadoo la kaashanayo .Wadashaqayntaas. Tani waxay xaqiijin doontaa in aadan aakhirka faqri tons xogta kala iibsiga.
Bedelka Data Isticmaalka Wondershare Mobiletrans
Wondershare Mobiletrans , qalab hal-click ah telefoon-ka-phone kala iibsiga, waxa uu inta badan loo isticmaalaa in lagu caawiyo in aad wareejiso xogta u dhexeeya telefoonada iyo kiniiniyada socda macruufka, Symbian, Windows, iyo Android. Iyada oo ay caawimaad, waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo nooc oo kala duwan oo nooc file u dhexeeya phone Android aad, phone Symbian, WinPhone iyo iPhone in mid ka mid click.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad ka badhamada download hoos ku ah.
Sida loo Photos, Videos, Music files wareejiyo ka Android inay WinPhone.
Talaabada 1: Wondershare Mobiletrans Open on your computer iyo xirmaan qalabka Android oo WinPhone in kombiyuutarka. Mobiletrans recogize doonaa labada qalabka dhowr ilbiriqsi.
Fiiro gaar ah: Ka dib marka aad labada qalabka xirmaan, waxaad bedelan kartaa il iyo dalal ku telefoonada adigoo gujinaya ah "Flip" button ku saabsan barnaamijka.
Talaabada 2: Mobiletrans Wondershare taageeri karaan si ay u gudbiyaan Photos, Videos, Music files si toos ah uga Android inay WinPhone. Dooro noocyada file aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan oo guji Start Transfer ka. Faylasha ayaa loo wareejin doonaa phone bartilmaameedka in dhowr daqiiqo. Fadlan ha barkinta labada qalabka inta ay socoto.
Easy in ay isticmaalaan. Ha u baahan yihiin xirfadaha wax farsamo si loo farsameeyo. User saaxiibtinimo.
Top 12 iPod in Lugood ama Transfer Computer Software
> Resource > Transfer > Sida loo Demi Xogta laga Android inay Windows Phone?